DEG DEG: Ciidamo Militari ah oo Qeybo ka mid ah Muqdisho xirtay – XAMAR POST
DEG DEG: Ciidamo Militari ah oo Qeybo ka mid ah Muqdisho xirtay
Wadooyinka qaar ee Magaalada Muqdisho, ayaa maanta xiran, waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan Militariga Somaliya oo gaadiidka dagaalka ku jaray wadooyinka.
Gaadiidka rayidka ayaa waxa ay ka leexanayaan Isgoyska Taleex ee Degmada Hodan, halkaasi waxaa jooga ciidamada Militariga oo wadada xirtay, lamana oga sababta wadada ay u xirteen ciidanka.
Sidoo kale ciidamada ayaa waxa ay xirteen Isgoyska Tarabuunka, wadada KPP illaa Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho, dadkana waxa ay yihiin kuwa lugeynaya.
Qof ka mid ah dadka reer Muqdisho ee soo lugeeyay, ayaa sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay gaadiidka Ciidamada Militariga ay wataan oo wadooyinka lagu jaray, halka ciidamada Militarigana ay adkeynayaan ammaanka.
“Taleex ayaan ka soo lugeeyay illaa Shaqaalaha ayaan imid, wadada Shaqaalaha Cabdi Bile Militari ayaa ku go’an dadka dhan way lugeynaayeen illaa Xamar weyne, qaarna baabuurta dadweynaha ayaa waxa ay ka raacayeen dhanka wadada Liberiya oo Baabuurta ay ku eeg yihiin.” Ayuu yiri qof ka mid ah dadka soo lugeeyay.
Ciidamada Militariga ayaa sidoo kale waxa ay xirteen Nawaaxiga xaafadda Warshada caanaha, Isgoyska Black Sea iyo Isgoyska Baar Ubax.
Warar soo baxay ayaa sheegaya inay suuragal tahay Madaxweynaha Somaliya inuu tago xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga, sidaasina wadooyinka loogu xiray, inkastoo arrintaasi aanan si rasmi ah loo xaqiijin.
Masuul Goordhow lagu Weeraray Muqdisho